» होमियोप्याथिक चिकित्सा पदति एक परिचय
होमियोप्याथिक जुनु थापा
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:२०
बुटवल । होमियोप्याथिक चिकित्सा पदति २३० बर्ष अगाडि जर्मनीका डा. सेमुयल हेनिमनले प्रतिपादन गरेको यो ब्यकित फरक उपचार पदति, प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित चिकित्सा पदति हो । होमियोप्याथिको शाब्दीक अर्थ हुन्छ होमियो मिन्स सिमिलर अथवा सामान र प्याथि मिन्स सफरिन्ड. अर्थात लक्षण भन्ने हुन्छ । यो चिकित्सा पदति समानले समानलाइ हटाउछ भन्ने तथ्ययुक्त बैज्ञानिक आधारमा प्रतिपादित भएका कारण अरु सबैखाले चिकित्सा पदति भन्दा छुटै आफनो पहिचान बनाउन सफल भएको चिकित्सा पदति हो । होमियोप्याथिक उपचार पदति एकदमै सरल सुलभ र इफेक्टिभ चिकित्सा बिज्ञान हो यसलाइ बिश्व स्वास्थ्य संगठनले एलोप्याथिक पछिको दोस्रो चिकित्सा पदतिको रुपमा लिएको छ ।
खासगरि युरोप , अमेरिका , एसियाका धैरै देशहरुमा सरकारी मान्यता सहित यो उपचार पदति प्रचलनमा छ । युरोपियन युनियनमा मात्रै ४० हजार भन्दा बढी होमियोप्याथिक डाक्टरहरुले यो चिकित्सा पदति अवलम्बन गरेका छन । भारतमा २० वटा भन्दा बढी University जसमा एउटा बिशुद होमियोप्याथिक University सहित २०० भन्दा बढी मेडिकल कलेज सचांलनमा छन र करिब ५ लाख होमियोप्याथिक चिकित्सकहरुले सेवा दिइरहेका छन । ग्रामिण तह देखि राष्टपति कार्यालय सम्म होमियोप्याथिक चिकित्सा सेवा सुचारु छ । त्यसैले पाकिस्तान, बगलादेश, श्रिलंका, मलेसिया लगायतका देशहरुमा समेत बिभिन्न University अन्तर्गत होमियोप्याथिक चिकित्सा सम्बन्धि पढाई हुन्छ र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रधान भइरहेको छ । यो चिकित्सा पदति सस्तो मात्र नभई अत्यन्त सरल प्रभावकारि र Enviroment friendly छ । यसको प्रयोग दिनानुदिन बिश्व परिभेषमा बढदै गइरहेको छ । त्यस अनुरुप नेपालमा समेत जन स्तरमा होमियोप्याथिक चिकित्साको प्रयोग बढि रहेको छ । हाल नेपालमा ३०० जना भन्दा बढी होमियोप्याथिक चिकित्सकहरुले देशका बिभिन्न क्षेत्रहरुमा यो चिकित्सा सेवा प्रदान गरिरहेको छन । अहिले आएर नेपालमा पनि होमियोप्याथिक चिकित्सामा बिरामीको लगाभ एकदमै बढदो क्रम छ । एउटा मात्र सरकारको मातहतमा रहेको अस्पतालमा करिब दैनिक ३०० जनाले निशुल्क चेकअपका साथै निशुल्क औषधि सेवा पनि लिइरहेका छन ।
२. होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिका जन्मदाता हेनिमन्को परिचय
सन १७५५ अप्रिल १० तारिखमा जर्मनीको माइसेन सहरमा होमियोप्याथीका जन्मदाता Christian Friedrich Samuel Hahnemann को जन्म भएको थियो उहाको पारिवारिक स्थिति एकदमै नाजुक थियो । उनको बाल्यावस्था सारै संघर्षपूर्ण थियो । यिनका पिता एक दमै गरिब थिए । चिनिया माटोको भाडामा बुटा हाल्नेकाम गरेर आफनो परिवारको पालनपोषण गर्दथे यहि गरिबिको कारणले गर्दा हेनिमन् आफनो अध्यनका लागि सारै दुख गर्नुपरेको थियो । तर हुने बिराउवाको चिलोपात भनेझै कुशाग्रबुदि र तिब्र प्रतिभाका धनि थिए । उनले २४ बर्षकै कलिलो उमेरमा एलोप्याथिमा एम.डि. को उपाधि हासिल गरिसकेका थिए । उनले सिबिलसर्जनको पदमा रही १० बर्ष सम्म डे््रसडेन अस्पतालमा सेवा कार्य गरे । त्यो समयमा डा. हेनिमन् एलोप्याथिक चिकित्सा पदतिसंग सहमति थिएनन् किनकि एलोप्याथि औषधि बाट एउटा रोगको उपचार हुनुको साथै शरिरमा कैयौ नया रोगहरु उत्पन् भैइरहनथे । सोहि समयमा उनको छोरी बिरामि भइन उनलाई राम्रो भन्दा राम्रो उपचार गरियो तर हेनिमन्ले आफनो छोरीलाई बचाउन सकेनन् र छोरी लाई सदाका लागि गुमाइ सकेपछि उनले एलोप्याथिक चिकित्सिा पदतिलाई सदाका लागि छोडिदिए त्यसैबेला आफनो जिविका पार्जन गर्नको लागि उनले चिकित्सा एवंम बिज्ञानका पुस्तकहरु बिभिन्न भाषामा अनुबाद गर्ने गर्दथे । उनलाई ग्रिक,लेटिन,अग्रेजि,जर्मन लगाएत १० भाषाको ज्ञान थियो सन १७९० मा डाक्टर कुलेनदारा लिखित मेटेरियामेडिका पुस्तकको अग्रेजि बाट जर्मन भाषामा अनुबाद गर्ने कर्ममा हेनिमेनले सिन्कोना भन्ने औषधिको बारेमा जानकारि पाए । उनले सिन्कोना भन्ने औषधिले मलेरिया ज्वोरोको लागि महत्वपुर्ण औषसधि हो भन्ने यिनलाई थाहा भयो र आफनै सरिरमा सिनकोनाको प्रयोग गरे त्यस पछि यस निष्कर्षमा पुगेकि जुन औषधिए पदार्थ स्वस्थ मानिसमा प्रयोग गर्दा जुन किसिमका रोग र लक्षणहरु उत्पन् हुन्नछन । उहि औषधि त्यसतै लक्षणहरु भएको रोगि ब्यक्तिलाई सुक्ष्म मात्रामा सेवन गराउनाले रोगको निदान गराउन सकिन्छ । भने कुरालाई नै मनन् गर्दा गदै उनको मनमा सिन्कोना जस्ता औषधिए गुण भएका पदार्थमा पनि रोगलाई निर्मल पार्ने शक्ति छ भनि उहाले ६ बर्षसम्म अनबरत रुपमा आफनो शरिरमा धैरै किसिमिका औषधिहरु परिक्षर्ण गरे यसै परिक्षणले हेनिमेन लाई सम समं शमयति अर्थात जस्ले रोग उत्पन्न गर्दछ उसैले रोग निको पार्छ भन्ने जानकारि भयो र उनले सहशरोगको सहश चिकित्सा भन्ने नया सिदान्तको प्रतिपादन गरे र त्यसलाई होमियोप्याथि चिकित्सा नाम दिए । १८औ शताब्तिको अन्ततिरको एउटा चमत्कारि तर बैज्ञानिक चिकित्सा जगतको उपलब्धि हो । यसको चिकित्सा दर्शनले बिश्वलाई एक नया चिकित्सा दर्शन दिएको छ । जस्को कुनै बिकल्प छैन । होमियोप्याथिले बिष्व स्वास्थ्य मिसनलाई पुरा गर्नमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ । जसको परिणाम आज हाम्रो सामु छ । डाक्टर सेमुयल हेनिमेनले जन्म दीएको होमियोप्याथि चिकित्सा पदति बिश्व भर प्रचलीत छ । डाक्टर हेनिमेनलाई होमियोप्याथिकको फादर भनेर १० अप्रिलमा उहाको जन्मोत्वस बिश्व भरिनै मनाउने गरिन्छ ।
३. होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिको प्रबेस नेपालमा
होेमियोप्याथि चिकित्सा पदति नेपालमा २००४साल राणाशासन कालदेखि भित्रिएको चिकित्सा पदति हो । २००४ सालमा नेपालमा प्रवेश पाईसके पछि २०१० सालमा सरकारि स्तरबाट सुरु भएको थियो । यस चिकित्सा पदतिलाई २०१० सालमा काडमाडौको हरिहर भवन स्थित पशुपति होमियोप्याथि अस्पतालको नाममा सुचारु भएको थियो त्यो अस्पताल सोहि ठाउमा अहिले पनि सन्चालनमा छ ।
४. होमियोप्याथिक औषधि कसरी बनाईन्छ र यसले मानव सरिरमा कसरी काम गर्छ
होमियोप्याथि चिकित्सामा प्राय गरेर उहि औषसधिहरुको प्रयोग गरिन्छ जुन आयुर्बेद एलोप्याथिक तथा युनानि चिकित्सा पदति अन्तर्गत प्रयोगमा ल्याईन्छ फरक यतिमात्रै छ कि अन्य चिकित्सा पदतिमा औषधिको प्रयोग स्थुलरुप ( क्रुडफर्मा ) गरिन्छ भने होमियोप्याथिमा औषधिको प्रयोग अत्यन्त सुक्ष्मरुपमा गरिन्छ । यि चिकित्सा विधिहरुमा वनस्पति, खनिज पदार्थ, पशुहरु तथा रोगजन्य बिषबाट तयार गरिएका औषधिहरु प्रयोगमा ल्याईन्छ ।
तर, औषधि निर्माणको प्रकृयामा भने फरक पर्न जान्छ । होमियोप्याथीमा प्रयोग हुने औषधिहरुको परीक्षण स्वस्थ ब्यक्तिहरुमा गरिएको हुन्छ । जनावर या रोगीहरुमा गरिएको हुदैन । होमियोप्याथि औषधिको कुनै प्रकारको दुष्प्रभाव (साईड ईफेक्ट) छैन ।
होमियोप्याथिक औषधिले होम्रो सरिर भित्र रहेको (Vital Force) डिफेन्समेकानिजमलाई Active गरि स्वउपचार प्रकृयालाई क्रियासिल बनाई रोगबाट मुक्ति दिनको लागि सहयोग गर्दछ । होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिको आधारमा रोगिलाई दिइने औषधिको मात्र अति न्युन हुनु पर्दछ । ताकि औषधि प्रयोग गरिसके पछि रोगिको शरिरमा कुनैै पनि दुष्परिणाम नदेखियोस । होमियोप्याथि चिकित्सा पदति यस्तो खालको चिकित्सा पदति हो जसमा निकै कम औषधिको प्रयोग गरि शरिर भित्र रहेको स्वउपचार प्रकृयालाई क्रियाशिल बनाई रोगलाई निदान गरिन्छ । होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोग गर्दा रोगि ब्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको शारिरिक एवम मानसिक कष्ट नदिइकन प्राकृतिक रुपबाट रोगिको उपचार गरि स्वस्थ बनाईन्छ । यो चिकित्सा पदति ब्यक्तिपरक उपचार पदति भएको हुदा होमियोप्याथिकमा रोगको नामले उपचार गरिदैन् । होमियाप्याथिक उपचार गर्दा रोगि ब्यक्तिको मानसिक एवम शारिरिक तथा भावनात्मक सबै पक्षको उपचार गरिन्छ जस्तै उदाहरणका लागि झाडापखला लागेका ५ जना रोगि ब्यकितको होमियोप्याथिमा एउटै औषधिले उपचार गरिदैन । यसमा उपचार गर्दा समष्टिगत लक्षणको आधारमा ५ जना रोगि ब्यक्तिलाई छुटाछुटै औषधिको प्रयोग गरिन्छ । किनभने होमियोप्याथिको मुल सिदान्त रोगिको उपचार गर रोगको होइन भन्ने हो । त्यसैले होमियोप्याथिकमा रोगको नाममा भन्नदा पनि रोगिको समष्टिगत लक्षणको आधारमा औषधिहरुको प्रयोग गरिन्छ । होमियोप्याथिक औषधि प्रयोग गर्दा रोगको प्रकार र रोगिको अवस्थामा भरपर्दछ । Acute रोगको तुलनामा दीर्घकालिन रोगहरुमा औषधिको प्रभाव केहि ढिलो हुन्नछ । होमियोप्याथिमा औषधिको एउटै आकार र प्रकार देखेर सबै रोगका लागि एउटै किसिमको औषधिहरु हुन्नछन भन्ने भ्रम पर्दछ तर बास्तवमा एकै प्रकारको औषधि हुदैन । होमियोप्याथिमा सेतो दानाले सबै रोग निको पार्दछ भन्ने जनमानसमा भ्रम छ । तर बास्तवमा सेतो दाना (Globules) स्वयम आफैमा कुनै पनि औषधि होईन । रोगिको शरिरमा औषधि पुर्याउने एउटा माध्यम मात्र हो । भौतिक रुपमा समान देखिएता पनि त्यस औषधिको प्रभाव एउटै प्रकारको हुदैन जस्तै बसपार्कमा देखिने सबै यात्रुबस एकै ठाउमा जादैनन् सबै आ आफनो गन्तब्य स्थान र छुटने समय बेग्ला बेग्लै हुन्छ । त्यसैले गर्दा होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिमा प्रयोग गरिने औषधिहरु देख्दा एउटै देखिएता पनि फरक किसिमको रोग र काम गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ ।
५. नेपालमा होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिको आवस्यकता किन
हरेक चिकित्सा पददिको आफना आफना Scope / Limitation हुन्छन ।
सबै चिकित्सा पददि आफैमा पुर्ण हुदैनन र सबै चिकित्सा पददि एक अर्काका परिपुरकको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन । होमियोप्याथिक उपचार अत्यन्त सस्तो शुलभ र effective चिकित्सा पदति हो । यो चिकित्सा पदति प्रयोगमा ल्याउदा कुनै पनि नकरात्मक असर नपर्ने हुनाले जुनसुकै उमेर समुहको बच्चा देखि बृदा सम्म र सुत्केरि अवस्थामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले बिश्वका बिकशित देशहरुमा समेत होमियोप्याथिक उपचार लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता बढदो छ । हुदा हुदै पनि सरकारि क्षेत्रबाट बिकास र बिस्तार गर्न नसक्दा हजारौ नेपालीहरु समेत भारतमा होमियोप्याथिक उपचार गराउन गइरहेका छन । होमियोप्याथिक औषधिहरु प्राकृतिक रुपमा पाउनेहुदा जस्तै बनस्पति, जैबिक र खनिज अन्य पदार्थबाट सरल रुपमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था बिध्यमान छ । बषैनि कैयौ नेपालिहरु उपचारको अभावमा महगो उपचार बाट दुख र कष्टकर जिवन बिताउन बाध्य छन । यस परिपेक्षमा होमियोप्याथिक उपचार बिधिबाट ठुलो आर्थिक भार बिना सरल र शुलभ तरिकाले उपचार गर्न सकिने हुनाले हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशमा यस उपचार पदति अत्यन्त प्रभावकारि हुनेछ । नेपालको सबिधान २०७२ मा पनि होमियोप्याथिक उपचार पदतिको बिकास बिस्तारलाइ समाबेश गरेको छ । बिश्व स्वास्थ्य सघठन र नेपाल सरकारबाट समेत यस उपचार पदतिलाई मान्यता दिएको छ ।
होमियोप्याथि चिकित्सा पदति हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देशमा आवस्यक हुनुका कारणहरु
१. बिना Side Effect बिरामिहरुले होमियोप्याथिक उपचार पाउने ।
२. होमियोप्याथिक उपचार पदितबाट उपचार गराउदा रोगको जरैदेखि उन्मुलन हुने भएकोले
बारम्बार रोग दोहोरिरहने अवस्थाबाट बिरामिहरुले मुक्ति पाउने ।
३. Operation गर्नुपर्ने धैरै रोगहरु होमियोप्याथिक औषधिबाट निको हुने सम्भावना रहेका
कारण यस्ता बिरामीहरुले समेत राहत पाउने ।
४. दीर्ध रोगीहरुमा होमियोप्याथिक उपचार निकै प्रभावकारी भएको
कारण यस्ता रोगिहरुले समेत राहत पाउने ।
५. हाम्रो जस्तो बिकाशोन्मुख देशमा सस्तो सुलभ कम लगानिमा जनतालाई सेवा
दिन सकिने ।
६. होमियोप्याथि चिकित्सा पदतिमा कस्ता किसिमका रोगहरुको उपचार हुनछन
अटो इम्युनो रोगहरुमा होमियोप्याथि चिकित्सा पदति एकदमै प्रभावकारि हुन्छ किनकि अटो इम्युनो रोगहरुमा मानिसको रोगसग लडन सक्ने क्षमता को हा्रस भएको हुन्छ त्यसमा होमियोप्याथि उपचारले एकदमै राम्रो उपचार गर्छ । जस्तै नशा, बाथ, प्यारालाइसिस, छालाका समस्या, स्वास प्रस्वासका समस्या, पायल्स, पत्थरी, ग्याष्ट्र्कि, महिलारोगहरु, बालरोगहरुमा अन्य तमाम दीर्गरोगहरुमा एकदमै इफेकटीभ छ ।
७. किन उत्कृष्ट छ ? होमियोप्याथिक चिकित्सा पदति
अन्य उपचार पदतिको तुलनामा होमियोप्याथिक चिकित्सा पदति उत्कृष्ट छ किन कि यो चिकित्सा पदति प्रयोगमा ल्याउदा कुनै पनि नकरात्मक असर देखिदैन । होमियोप्याथिक चिकित्सा पदतिले रोगलाई जरैबाट निको बनाउने हुनाले बारबार दोहोरिने सम्भावना एकदमै न्युन हुन्छ । यो चिकित्सा पदति प्रयोगमा ल्याउदा कुनै पनि नकरात्मक असर नपर्ने हुनाले जुनसुकै उमेर समुहको बच्चा देखि बृदा सम्म र सुत्केरि अवस्थामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य उपचार पदतिको तुलनामा होमियोप्याथि उपचार पदति सस्तो सुलभ छ । यस उपचार पदतिमा निस्कियका जति पनि औषधि प्रयोगमा आएका छन ति औषधि प्रयोगमा ल्याइए सकेपछि औषधिले कुनै दुसप्रभाव गरेर प्रतिबन्ध लागाईएका कुनै पनि औषधिहरु छैनन् त्यस कारणले गर्दा पनि होमियोप्याथि चिकित्सा पदति उत्कृष्ट छ ।
लेखक मकालु स्वास्थ्य उपचार केन्द्र प्रा.लि.बुटवलमा कार्यरत साथै अखिल नेपाल होमियोप्याथिक एसोसिएसन प्रदेश नं.५ का सहसचिब (होमियोप्याथिक जुनु थापा ) बाट लिएको जानकारि ।
सन्दर्भ होमियोप्याथिक दिवस